Kirby Jenner dia manohy ny famerenany an-tsokosoko nomerika mba hananany olo-malaza | Famoronana an-tserasera
Kirby Jenner dia mpanakanto iray misaotra ny majika ao amin'ny Photoshop Nampidirina tanteraka tao anatin'ireo maro izay asehon'ireo malaza avy amin'ny kaontiny Instagram.
Ya niresaka momba an'i Jenner tamin'ny androny izahay toy ny mpamosavy Photoshop ary averinay indray ianao miaraka amin'ny sasany ny sarinao farany retouched. Ny marina dia raha tsy milaza aminao izy ireo fa tafaverina ireo sary ireo dia tsy ho tsapanao akory izany, satria mahatalanjona tsotra izao ny haavon'ny fahalavorariana.
Ianao dia afaka jereo izy amin'ny sarin'ny fianakavian'ny rahavavy malaza Amerikanina amin'ny fisamborana marobe miaraka amin'io feo mahatsikaiky toa toa ihomehezana azy ireo mivantana io.
O maka sary miaraka amin'ireo maodely ambony indrindra miaraka amin'ny endrika tsy misy endrika ary manahaka tanteraka amin'ny fotoana rehetra. Ny marina dia ny filohany dia tena natoraly ary manana izany feo mahatsikaiky izany izay mahatonga ny tsirairay amin'izy ireo ho ny sarin'izy ireo manokana sy mitsikera izay rehetra miaraka aminy.
Ary saika lasa ilay protagonista amin'ny famerenana sary indray ny sary aiza no sarotra ny mitady lesoka amin'ilay firafitra. Ambonin'ny zava-drehetra, hainy tsara ny fampiasana ireo sary mora kokoa ireo hampidirana azy ao amin'ilay sehatra. Amin'ny fanolorana imbetsaka ny tena valiny izay toa toy ny iray amin'ireo maodely izy.
Ohatra iray hafa amin'ny fananana ny Photoshop afaka nanova ny indostrian'ny famolavolana ary ny fahaiza-mamorona sary amin'ny ambaratonga rehetra. Mazava ho azy, Kirby dia manao izany amin'ny tonon-javatra tsy dia mahazatra loatra ary miaraka amin'io endrika io izay milaza zavatra betsaka noho izay lazainy ao anatin'ireo sary retouched marobe azonao jerena ao amin'ny kaontiny Instagram.
Hanaraka manana fihomehezana noho ny hatsikana nataon'i Kirby avy amin'ny kaontinao Instagram miaraka amin'izany mpanjohy maherin'ny 1 tapitrisa ananany sy ny fomba fandraisan'ny tsirairay amin'ny lahatsorany tiany an'aliny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Kirby Jenner dia manohy mampiseho ny tenany amin'ireo olo-malaza sy maodely amin'ny fomba tsara indrindra
Ahoana ny fanovana ny borosiko avy amin'ny .TPL ho .ABR ao amin'ny Photoshop